ANDRIAMIFIDY (1846 – 1922) | FJKM Ambonin'Ampamarinana
FJKM TRANOVATO AMBONIN'AMPAMARINANA
Mpanazava sy Tily
Vehivavy Kristiana Dorkasy
Asa Fitoriana ny Filazantsara
Vovonan’ny Tanora Tsimihatsaka
Mpandala ny Fitoriana ny Tenin’Andriamanitra
Mikarakara ny Sahirana
MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA
RAKOTONARIVO (1913 – 1995)
Johanesa RAKOTOVAO (1899 – 1964)
Henry RANDZAVOLA (1873 – 1953)
ANDRIAMIFIDY (1846 – 1922)
Josefa ANDRIANAIVORAVELONA (1835 – 1897)
Benjamin BRIGGS (1837 – 1914)
Teraka teto Andafiavaratra ny 24 Jona 1846 izy. Zanak’i Rainimahajery sy Rafaravavy. Zanaka kristiana nazava saina dasy manam-pahaizana. Nanambady aman-janaka koa izy.
Anisan’ny Fiangonana teto Ambonin’Ampamarinana hatrany am-boalohany. Anisan’ny mpianatra voalohany koa tao amin’ny Kolejin’ny LMS tao Ambohimanoro. Efa minisitry ny raharaham-bahiny tao amin’ny fitondrana Malagasy ary tonga mpitandrina teto Ambonin’Ampamarinana.
Manana fanomezam-pahasoavana amin’ny tenim-pirenena. Mpanoratra amin’ny Gazetim-piangonana. Nanoratra boky nahaizana tantara sy loharanom-pahalalana. Nanan-kozaraina indrindra tamin’ny fampianarana Soratra Masina sy toriteny.
Fa mpanompon’Andriamanitra nitondra fijaliana tamin’ny fanovana teto Ambonin’Ampamarinana: Raki-pisaorana mangina. Maimaimpoana ny fahasoavan’ny famonjena. Fa najanony ny asan’ny Diakona vehivavy teto. Nisy ny ala-olana nentiny tamin’ny raharaham-piangonana sarotra.
Tonga mambra tao amin’ny Akademia Malagasy izy. Nanan-kozaraina tamin’ny asa soratra maro amin’izany sehatra izany koa. Amin’izao dia mbola hisitrihan’ny firenena sy ny Fiangonana ny tarazo Andriamifidy. Nitondra teto nandritra ny 24 taona izy (1898 – 1922)
Adiresy – Fifandraisana
+261 34 41 804 58
+261 20 22 268 94
FJKM Tranovato Ambonin' Ampamarinana.
Lot VX 44, Antsahatsiroa
Vondrona ao amin'ny Facebook
Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara - Foibe
SAF / FJKM
© FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana - 2014